‘आमाको प्रेरणाबाट गीत गाउन सुरु गरे’ - khabarpatro
‘आमाको प्रेरणाबाट गीत गाउन सुरु गरे’
२०, माघ २०७८
भैरहवा, २० माघ ।
रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका वडा नम्बर ३ मुर्गियाका लोक दोहोरी गायक राम प्रसाद पौड्यालले फेरी नयाँ गिती एल्बम बजारमा ल्याएका छन् । “बालुमई” नामक सो गिती एल्बममा शब्द संयोजन प्रल्हाद सुवेदी र संगित बसन्त थापाले गरेका हुन् । विभिन्न तीन दर्जन गिती एल्बममा गीत गाएका लोक गायक पौडेलले लोक दोहोरीको विधामा दुई अवार्ड समेत पाएका छन् ।
“मेरी आमा” नामक गीतबाट वि.सं. २०७४ मा र “बालआश्रम” नामक गीतबाट जुरी अर्वाड पाएका उनले वि.सं. २०५९ सालदेखि गायन क्षेत्रमा अग्रसर भएको बताए । ‘मेरी आमाले पहाडमा दाउरा घाँस बोक्दा गीत गाउँदै काम गर्नुहुन्थ्यो, मैले पनि आमाकै प्रेरणाबाट गीत गाउन सुरु गरे’ उनले भने ।
गायक पौडेलले पारिजात बसाउँछ, आमाको माया–२, चट्टै माया मार्‍यौ, हो की होइन माया लाउने लगायत तीन दर्जन गीत गाएका छन् ।
गायक पौडेलले विभिन्न मेला, महोत्वसमा पनि गीत गाएर सम्झौताअनुसार आम्दानी गरेको बताउँछन् । ‘गीत संगितमा लागेर उल्लेख्य आम्दानी भएको छैन, ’उनले भने ।
रेडियो नेपालबाट भ्वाइस पास गरेर गायन क्षेत्रमा लागेको बताउने उनले आर्थिक अभावका कारण काठमाडौंको दोहोरी साँझमा समेत गित गाएको स्मरण गर्छन् । ‘आर्थिक अभावका कारण मैले ठूलाठूला समस्या झेलेको छु, ’गायक पौड्यालले भने ।
प्रकाशित मिति :माघ २०, २०७८ बिहिवार - १४:४९:१९ बजे
भैरहवाका ई–रिक्सा चालक आन्दोलित, नगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीले दुःख दिएको गुनासो
कोरोना जोखिम भत्ता नपाएको भन्दै भीम अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरुद्वारा संघर्ष समिति गठन
भातृ संगठनलाई पूर्णता दिन सभापति पुनको प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह
मायादेवी स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम : पशुपालक कृषकलाई मेशिन वितरण
अब आफूखुसी घर जग्गा बिक्री गर्न नपाउने
पत्रकार मनोज क्षेत्रीलाई मातृशोक